Al-Shabaab oo dib ula wareegtay Bacaadweyn iyo Camaara | KEYDMEDIA ONLINE
Al-Shabaab oo dib ula wareegtay Bacaadweyn iyo Camaara
Dadka degaanka ayaa sheegaya in daqiiqado kadib, markii ay baxeen Ciidamada huwanta ah, ay Al-Shabaab gudaha u galeen degaannadii dhawaaan laga sifeeyay.
MUDUG, Soomaaliya – Kooxda Al-Shabaab ayaa dib ula wareegtay dhamaan degaannada dhaca koofurta Mudug ee dhawaan laga fara-maroojiyay, kadib markii ay ka baxeen ciidamada Daraawiishta Galmudug iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya.
Degaannada Bacaadweyne, Camaara, Qeycad, Shabeelloow, Sabeyna-gowrac, Gaadaay, Laas-gacameey iyo kuwo kale, ayay gabal-dhicii galabta lagu arkay Kooxda Al-Shabaab, waxaana dib degaannaas looga taagay calanka Madow.
Talaadadii, Ciidamada XDS iyo kuwa Galmudug, ayaa dib ula wareegay Camaara, iyaga oo taageero ka helaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka, kadib saacado kooban oo Al-Shabaab ay gacanta ku hayeen magaalada.
Muddo ka badan Labo bilood, oo koofurta iyo bariga Mudug ay ka socdeen dagaallo lagu riiqmay, waxa ay hadda u muuqataa arrintu mid faraha ka baxday waxaana shacabka Soomaaliyeed la yaab ku noqotay tallaabada ay ciidamadu u banneeyeen degaannada muhiimka ah.